သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ (၁၈)နှစ် ပြဿနာ – Shwe Canaan
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ (၁၈)နှစ် ပြဿနာ
April 19, 2016 Shwe Canaan Uncategorized, အထွေထွေ 0
ယေရှုခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ကို ဖတ်
ရှုလေ့လာကြသောအခါသက်တော် (၁၂) နှစ်
မှ အနှစ် (၃၀) အတွင်း ကြားကာလ (၁၈) နှစ်
တွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘယ်မှာရှိနေသ
နည်း။ ထိုကာလ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဘ၀တ
စိတ်တပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ခရစ်တော်ကြောင့် …
ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာ ဓမ္မဟောင်းကို အေ
ခေပြုထားတာမို့ အလွန်ရှေးကျတဲ့ ဘာသာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တကယ့်
တကယ်တော့ ခရစ်တော်သာလျှင် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကို စတင်တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းကာလဟာ ဂျူးဘာသာ ကာလလို့ ပြောရင် မမှားလောက်ပါဘူး၊ လောကကြီးစတင်ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရပြီး ပထမလူသား အာဒံမှ ခရစ်တော်မပေါ်ပေါက်မှီကာလတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း အယူအဆကို ဂျူးဘာသာ၊ အစ္စလန်ဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့က လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်အငှားလွယ်တဲ့အခါ မိန်မသားဟာ လင်ယောင်္ကျာတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးဖို့မလိုသလို သူမရဲ့ ဗီဇအသွေးအသားလည်း ပါဝင်ဖို့မလိုဘူး၊ သူက သားအိမ်ကို ခေတ္တပေးထားရတာပဲ၊ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံမှုကင်းတဲ့ မိန်းကလေးဟာ အပျိုစင်ပဲမဟုတ်လားဗျာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သံဝါသမပြုပဲ ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်အငှားလွယ်တဲ့ကိစ္စ (တနည်းအားဖြင့် သားအိမ်အငှားလွယ်ခြင်းကိစ္စကို စပြီးကျင့်သုံးသကတော့ ထာဝရဘုရားသခင်ပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။Testube Baby တွေထဲမှာ သားဦးဟာ ယေရှုခရစ်တော်လို့ ပြောကြည့်ကြရအောင် …။
၁၂ နှစ်သားကာလအထိ ….
သက်တော်စဉ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တဖန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါ သက်တော် ၃၀ အရွယ်ရှိနေပါပြီ၊ ဒီကြားထဲမှာ ၁၈ နှစ်တိုင်တိုင် ဆိတ်ငြိမ်သောနှစ်ကာလ Silent Years ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတော့ …
ယေရှုသည်လည်း အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ ပညာတိုးပွားလျက် ဘုရားသခင်ရှေ့၊ လူရှေ့မှာ မျက်နျာရတော်မူ၏ (လုကာ ၂း၅၂) လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် …
“Jesus went back with them to Nazareth, where he was obdient to them” 51.a
“Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men.” (52)
“This experience, however, brought no expression of arrogance of ogotism on the parts of the boy Jesus. Here turned with Mary and Joseph to Nazareth subject to them as in the past. Of his experience from that time to the beginning his public ministry we know nothing in detail, but only inageneral way that he ledanormal but pure and benevolent life. It is generally believed that Joseph died in the early years of Jesus manhood and that Jesus then became the head of the Nazareth household .. ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
၀င်းမော်ဦးစာပေမှထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသော စာအုပ်တစ်အုပ်၌မူ အိန္နိယနိုင်ငံ၊ ဘုံဘေမြို့ အယ်လိဖင့်စတုန်းကောလိပ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး J Wilson MA Oxford University ၏ အမေးနှင့်အဖြေကဏ္ဍတွင် သက်တော်စဉ်၏ အပိုင်းအစ တချို့ကို မှားယွင်းကောက်ချက်ချထားသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ ၁၈ နှစ်ကာလအတွင်း ယေရှုခရစ်တော်သည် တိဘက်ပြည်ကိုသွား၍ … ဆိုသော အကြောင်းအရာများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ချီကာကိုမြို့ ကမ္ဘာကျော်ခရီးလည့်လည်သူ သုတေသနပုဂ္ဂိုလ် ဂိုးရစ်ခ် ရဲ့ မှတ်တမ်းအရ .. ဟု ကိုးကားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးရစ်ခ်၏ မှတ်တမ်းဆိုသော်လည်း စာအုပ်ထုတ်ဝေမှု ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း မှီငြမ်းပြုသည့် အချက်အလက်မပါပဲ နှုတ်စကားမှီငြ်းသဖြင့် ပညာရှင်မဆန်ပါ၊ ယုံကြည်လောက်ဖွယ်ရာ အထောက်အထား အားနည်းခဲ့ပါတယ်။
သူ မရေးခဲ့တာပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ (၁၈)နှစ်ကာလကို ၀ါကျတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ သူက ပိုင်းဖြက်သွားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဆန့်ကျင်သူတွေက ဒီနေရာကို အားစမ်းပြီး ဖြိုဖို့ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာတယ်။ စာအုပ်စာပေတွေ ရေးသားထုတ်ဝေ တိုက်ခိုက်လာတယ်။ ဒါကို ဖတ်မိတဲ့ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရင်ထဲမှာ ခံစာကြရတယ်။ ကျွန်တော် အယ်ဒီတာလုပ်နေတဲ့ဆီကို စာအချို့ရောက်လာတယ်။ ဒီပြဿနာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ မေးမြန်းကြတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်ပဲ ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာက ရှိနေပြန်တယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစာအုပ်များကို ဖတ်မိပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်း နုနယ်သူအတွက်တော့ လဲပြိုလောက်ပါတယ်။ အောက်ပါဥပမာကလေးများကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
တိဗက်ကို သွားမသွား ….
R.W.F Wootoon ကတော့ သူ့ရဲ့ Christian Worship စာအုပ်မှာ “But we do not know of any other visit in the first 30 years of His life (Pg-41)” လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
လု ၄း၁၆ တွင်မူ ကြီးပွားတော်မူရာ နာဇရက်မြို့သို့ ရောက်တော်မူလျှင် ….
နာဇရက်မြို့မှာ (၁၈) နှစ်တိုင်တိုင် နေထိုင်ခဲ့သော ခရစ်တော် ဘာလုပ်နေသနည်း။ ဤမေးခွန်းမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။ Rev .သိမ်းအုပ် ၏ (၁၈)နှစ် ပြဿနာစာစောင်ကလေးတွင်မူ (၁၈)နှစ်ကာလ သူဘာလုပ်နေသည်ကို ဓလေ့ထုံးတမ်းအမြင် Customary View မှ တင်ပြ Point out လုပ်ပါတယ်။
မာကု ၆း၃ မှာ သူသည် လက်သမားသားမဟုတ်လော၊ မာရိ၏သားမဟုတ်လော။ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ရှိမုန် … တို့၏ အစ်ကိုမဟုတ်လော ဟု ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အချက်များမှ ..
ယေရှုသည် လက်သမားသားဖြစ်သည်။ ယုဒထုံးစံ၌ သားသမီးတို့တွင် အကြီးဆုံးသောသားသည် မိမိဝါသနာပါရ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရွေးချယ်၍မပြုရ၊ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ၀ါသနာပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ ဖခင်၏ လုပ်ငန်းကို ၀ိုင်းကူလုပ်ကိုင် သက်မွေးရသည်။ ကျန်သားသမီးများက မိမိစိတ်ကြိုက် နှစ်သက်ရာ၊၀ါသနာပါရာတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အသက်(၃၀)နှစ်မပြည့်မချင်း ဘာသာရေးဝင်ရောက် ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ပြုရိုးထုံးစံမရှိ၊ သဘာဝလည်းကျပါသည်။
အသက်(၃၀)ရှိမှ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှု၊ ဗဟုသုတစုံလင်မှုရှိပြီဖြစ်၍ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကို ၀င်ရောက်လုပ်ခွင်ပေးမြဲဖြစ်သည်ကို လည်းကောင်း….
တကယ်တော့ ခရစ်တော် တိဗက်ကို မသွားပါဘူးဆိုတာနဲ့ ပြီးပြတ်ပါပြီ၊ သို့သော် စာရွက်ပေါင်း ၁၀၀ ပေါ်မှာ (၁၈)နှစ်အတွင်း အတွေ့အကြုံကို သက်သေခံထားတယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်၊ ဟေဗြဲဘာသာနဲ့ ရေးတဲ့မှတ်စု၊ ၁၉၂၅ခုနှစ်မှာ ဂိုးရစ်ခ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ စာအုပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်မမြင်ဖူးပါဘူး၊ ရှိတယ်ဆိုတာပဲ ကြားဖူးတာပါ။ သို့သော် ဒီအကြောင်းဟာ မမှန်နိုင်ဘူးခင်ဗျ။
အဲဒီအချိန်မှာ စာရွက်မှ မပေါ်သေးပဲကိုး၊ စာရွက်၁၀၀ကို (AD-30) လောက်မှာ ဘယ်ကိုသွားရှာမလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ စာကျက်တဲ့အခါ အလွန်အော်ကျက်တတ်တယ်။ တစ်နေ့မှာ သူကျက်တဲ့ဆယ်တန်းစာတစ်ပိုဒ်မှာ
“Paper was invented in China at the begining of the second century A.D” တဲ့၊ တကယ်တော့ ဂိုးရစ်ခ်ဟာ ပါမောက္ခတစ်ဦးလို့ ဆိုတယ်။ ဘယ်လိုပါမေက္ခမျိုးလဲတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိတာအမှန်ပါပဲ …
အဖြစ်အပျက်အမှန်ကတော့ သမ္မာကျမ်းထဲမှာ ပါပြီးသားပါ။ သေသေချာချာစေ့စေ့ငှငှ ဖတ်ရှုရင် ပြီးပြည့်စုံအောင် သိနိုင်မှာပါ။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကိုပဲ ယုံကြည်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ မပိုစွန်းသလို၊ တစ်ပုဒ်တစ်လေမှ မလိုလွန်းဘူး ဆိုတာကိုလည်း စိတ်နှလုံးမှတ်ကျုံးရပါလိမ့်မယ်။
ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ (၁၈)နှစ်ကာလကို ညိုသောင်းဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ (ဘာသာတရားများစွာကို သုတေသနပြုသူ) က .. “ယေရှုသည် ဖခင်ယောသပ်ကဲ့သို့ လက်သမားလုပ်၍ နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ အသက်၃၀တိုင်အောင် ကြာညောင်းခဲ့လေသည်” .. ဟုရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကော ဘယ်လိုပြောမလဲ၊
MURANN မှတ်ချက်။ 2008 တွင်ထုတ်ဝေသော ထစ်ချုန်းသောမိုကြိုးသံ စာအုပ်မှတဆင့်ဖေါ်ပြပါသည်။ ဆရာဆိုး၊ ၈၉၃(ခ)၊ ည/၁၁ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းသွယ်(၃)၊ ရွှေပြည်သူမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း cwhsoe@gmail.com
www.murann.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။